कारोबार रकम २७ प्रतिशत बढ्यो - Naya Patrika
कारोबार रकम २७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं, १९ पुस | पुष १९, २०७४
मंगलबार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ४४ अंक बढेको छ । नेप्से सामान्य मात्र बढे पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम भने २७ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बढेको छ । बजार खुलेको केही समय बढेर ओरालो लागेको नेप्से, कारोबारको एक घन्टा अवधि नबित्दै पुनः बढ्न थालेको थियो । बढेर १ हजार ४ सय ५० बिन्दुमा पुगेको नेप्से अन्तिम समयमा सामान्य घटेर १ हजार ४ सय ३७ दशमलव २४ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले आइतबार ब्याज नबढाउने सहमति गरेपछि बजार बढ्न पुगेको थियो । साथै, लगानीकर्ताहरूले सेयर खरिद गर्न थालेपछि बजार बढ्न टेवा पुगेको हो । तुलनात्मक रूपमा कम्पनीका सेयरमूल्य सस्तिएका कारण लगानीकर्ताहरूले सेयर खरिद गर्न थालेका छन् ।
यस दिन १ सय ६६ कम्पनीको ६ हजार ८ सय २ पटकको कारोबारमा रु. ६३ करोड ३२ लाख २२ हजार ४ सय १२ बराबरको १२ लाख ६२ हजार ४ सय १७ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशमलव १४ अंक बढेर ३ सय २ दशमलव ४६ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३८ दशमलव २७ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति रु. २ अर्ब ८३ करोड बढेर रु. १६ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको छ ।
रकमका आधारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यस दिन सो बैंकको रु. ६ करोड ५२ लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, प्रभु बैंकको रु. ३ करोड ७४ लाखबराबरको सेयर किनबेच भएको छ । हकप्रद सेयरका लागि बुक क्लोज मिति नजिकन थालेका कारण यस बैंकको सेयर कारोबार बढेको हो । मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य यस दिन ७ दशमलव ४१ प्रतिशत र श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको सेयरमूल्य ७ दशमलव २६ प्रतिशत बढेको छ । एभरेष्ट बैंकको कभर्टिबल प्रिफरेन्स सेयरको मूल्य यस दिन ६ दशमलव ६ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ६६ कम्पनीमध्ये ५८ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ९२ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १६ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
मंगलबार बैंकिङ, ट्रेडिङ र ‘अन्य’ समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत, ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत र ट्रेडिङ समूहको शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ । होटेल समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक २ दशमलव ३४ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् समूहको परिसूचक १ दशमलव ४६ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत घटेको छ ।